आजदेखि नयाँ नोट पाइने, कुन-कुन बैंकमा साट्न पाइन्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
आजदेखि नयाँ नोट पाइने, कुन-कुन बैंकमा साट्न पाइन्छ ?
काठमाडौं, असोज २१ । आउदैं गरेको दसैं र तिहारका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि नयाँ नोट साटिदिने भएको छ । विभिन्न दरका २७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ट्याग्स: Naya not, Naya Rs